हेर्दा हेर्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी ! -
२०७७, २७ भाद्र शनिबार १२:०७
कस्तो बनौँला, के के गरौँला, कति सुख र खुशीका साथ जिऔँला, घुमौला, रमाईलो गरौँला भन्दथ्यौँ हामी । पिरतीका सुन्दरमाला उनेर जीवनमा सजाऔँला भन्दथ्यौँ हामी । ढकमक्क बगैँचामा मनमौजी घुमेर नीलो आकाशजस्तै निश्छल मन लिएर एकअर्का बात मारौँला भन्थ्यौँ हामी ।
झरनाका कञ्चन पानी पिउँदै, सुइसेला मार्दै प्रकृतिको मजा लिँदै बिना अबरोध डुलौँला भन्थ्यौँ हामी । जुनेली रातभरी एकअर्का हात समाएर खोलाको बगरै बगर भएर टाढा टाढा पुगौँला भन्दथ्यौँ हामी । बालुवाकै सही, तिम्रो र मेरो सपनाको महल बनाउँला भन्थ्यौँ हामी ।
पहाडका टाकुराहरुमा पुगेर टाढा टाढाका गाउँ बस्तिहरुको सुन्दर दृष्य हेरौँला भन्थ्यौँ हामी । वनपाखामा रातै भएका लाली गुँरासको सुन्दरताको बयान गर्दै एकअर्काको हात समाएर चिसो हावाको वेगसँगै नागीमा कुदौँला भन्थ्यौँ हामी । देउराली र भञ्ज्याङ्गको चौतारामा बसेर दिन बितेको पत्तै नपाउने गरी पिरतीका कुरा गरि बसौँला भन्थ्यौँ हामी । तिम्रो र मेरो एउटा सानो संसार सजाऔँला र जीवनको पल्लो छेउसम्म नै सँगै जिऔँला र सँगै मरौँला भन्थ्यौँ हामी । तर हेर्दा हेर्र्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । च्यातिएको चिठीजस्तै भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । हो च्यातिएको चिठी जस्तै भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । अब कुनै अर्थ छैन तिम्रो र मेरो सम्बन्धको । कुनै मिलनको सम्भावना छैन तिम्रो र मेरो माया पिरिमको । टुक्रिएको शिशा जोडिएको बित्थैको कल्पना गर्नु सिवाय ।
यति भै कन पनि तिम्रो लागि मेरो छातिमा अझै केही माया बचेको छ । तर अर्थहीन माया । यो माया किन बचेको हो ? म यसै भन्न सक्दिन । सायद, तिमी र मैले जस्तै नियतिको खेल भोगेका थुपै्र थुप्रैहरुका मनहरुमा पनि आफ्ना आफना माया थिग्रिएर बसेका होलान् । जुन अब केही कामका हुने छैनन् ।
केवल खिया लागेर दिनानुदिन खिइदैछन् । तिम्रो लागि मेरो मनमा केही माया बचे जस्तै मेरो लागि पनि त्यो छातीमा अभैm केही माया बचेकै होलान् । तर त्यो तिमीलाई मात्र महसुस हुने कुरा हो । त्यो अब न तिमीले मलाई दिन सक्छ्यौ न त काँडाको खिल झिके जस्तै झिनो आइया आवाजसँगै चिम्टीले चेपेर थुतेर फाल्न सक्छौ । अनि चौताराको वरीपरी अभैm हाम्रो छायाँ होला । ती चौताराहरु वरीपरी हामी पिरतीका कुरा गर्दै एकै गुजुल्टो परेर धेरै धेरै बेरसम्म घुम्थ्यौँ । त्यहाँ हाम्रो छाँया अझै देखिन्छन् होला । जहाँ हामीले रात रात भरी, भुतले नबुझिने भाषामा के के गुनगुनाए जस्तै धेरै थोक गुनगुनाएर जुनको शीतल प्रकाशमा चौतारा वरीपरी लुकामारी खेलेथ्यौँ ।
त्यहाँ हाम्रा छाँया अझै होलान । अरु मायालु जोडीहरुलाई चौताराले हाम्रो मायाको भित्री कथा सुनाउँदै होला । र, ती अमुक प्रेमिल जोडीहरु व्यथित बन्दै होलान् । सपना टुट्छ भनेर जान्दा तिनीहरु पनि मर्माहत हुँदा होलान् । दिन भरी घोप्टिएर रुँदा हुन् ।
के गर्नु ? लाखौँ चोटी बिर्सन खोजेर पनि बिर्सन नसकेपछि, राखेको छु चोखो गरी कसम तिम्रो पनि । माया पिरतीमा कसम भन्दा अर्को ठूलो कुरा के नै हुँदो रहेछ र तरपनि कसम मानि रहन कहाँ सकिँदो रहेछ र । कसम झुठो नभएपनि मान्छे झुठो र फरेबले घेरिएको हुँदो रहेछ । त्यसैले हाम्रा कसम कसम नै रहिगए । अनि हेर्दा हेर्र्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । च्यातिएको चिठीजस्तै भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । फगत एउटा कागजको टुक्रा र त्यसमा लेखिएका किरिङ्गमिरिङ्ग अक्षरहरु जस्तै भए तिम्रो र मेरो जिन्दगी । सत्य पनि असत्य बनिदियो । असत्य पनि सत्य बनिदियो । भन्न त भन्छन् मान्छेहरु सत्यकै जीत हुन्छ । तर तिम्रो र मेरो पिरतीको सम्बन्धमा सत्यले तीन बल्ड्याङ्ग खायो । सत्यकै जीत भएको देखाउन धेरै असत्यको सहारा लिनु पर्दो रहेछ । तैपनि दोबाटो झैँ दुई दिशामा छुटेर पनि जिन्दगी, राखेको छु चोखो गरी कसम तिम्रो ।
मान्छेहरुले देखिएका कुरा मेटन् सक्दा रहेछन् तर मनमा नदेखिने गरी बसेको कुरा मेट्न नसकिँदो रहेछ । त्यो घरिघरि बल्झि रहँदो रहेछ । किन यस्तो हुन्छ ? के छ मेरो मनमा भनेर हेर्दा तिम्रो लागि अझै पनि चोखो कमस बाँकी रहेको पाउँछु । सायद तिमीलाई पनि त्यस्तै हुँदो होला । समय बित्दै गएपछि बितेको समयलाई मानिसले त्यसलाई मीठो पलको रुपमा सम्झना गर्दो रहेछ । हो त्यस्तै गरी तिम्रो र मेरो पिरतीका पलहरु पनि त्यस्तै गरि मीठो थियो । हो, एउटा मिठो घडी थियो हुरी जस्तै उडी गयो । जति नै मीठो भएर के गर्नु ? त्यो थाहै नपाई हुरी जस्तै कता कता उडि गयो । धेरै धेरैको सपना जस्तै हाम्रो पनि मीठो पल र सपना उडि गयो । आकाशमा माथि माथि पुगेर बादलसँग मिसियो या अँध्यारोमा खसेर हरायो । या धुलो बनेर उडि गयो या त जलेर खरानी बन्यो । भन्थ्यौँ हामी, तिम्रो र मेरो माया जस्तो अजम्बरी माया कस्को पो होला र ? अनि भन्थ्यो हामी, हाम्रो पिरती जुनी जुनीसम्म अजम्बरी हुनेछ । तर, अजम्बरी मनको माला बेघडीमा नै चुँडी गयो । हो तिम्रो र मेरो माया केही वर्षपनि बाँचेन ।
त्यो घायल भयो र मृत्यु शैयामा लम्पसार भयो र चितामा दनदनी बल्यो । केवल स्मृति बनेर आइरह्यो । माया पिरती अजम्बरी हुन्छन् भन्नेहरु ती झुठा रहेछन् । सबै सबै नै च्यातिँदो रहेछ । सबै कुरा चुँडिदो रहेछ । टुक्रिँदो रहेछ । चाहे त्यसमा कसैको दोष नै नहोस् तै पनि त्यो टुड्दो रहेछ थाहा नपाई । हो त्यस्तै भयो तिम्रो रे मेरो पिरती सम्बन्धमा पनि। न गल्ती थियो मेरो पनि न दोष थियो तिम्रो ।
तिम्राे र मेरो कसैको दोषै छैन र पनि हामी नदीका दुई किनार भइ गयौँ । एक हुनै सकेन यो दुईको प्यारो जिन्दगी । सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने धोको र बाचा अधुरै भयो अनि हेर्दा हेर्र्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । च्यातिएको चिठीजस्तै भयो तिम्रो र मेरा जिन्दगी । कहिले काहिँ त यस्तो लाग्छ कि आच्या पिरती भनेको यस्तै हो त ? तीन छक्कै पो परेँ म त । तिमी र म दिनभरी न्यानो घाम ताप्दै आकाश हेरेको त्यै चप्लेटी ढुङ्गामा उत्तानो पल्टेर सोच्दछु, अप्पुई, हेर्दा हेर्र्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी । च्यातिएको चिठीजस्तै भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी ।
अनि उड्यो परपरसम्म, माथि माथि सम्म हामीले लेखेर च्यातेका असंख्य चिठीका टुक्राहरु हावामा र खसे कता कता वन जङ्गलमा, रुखका पातहरु झैँ पिर्लिक्क पिर्लिक्क गर्दै तिमी र मलाई अधमरो छाडेर अनि बिस्तारै बिस्तारै बिलाए सदाका लागि ।
तिमीले कतैबाट खोजेर ल्याएर रोपेको त्यो सानो पिपल र मैले पनि कतैबाट खोजेर ल्याएर रोपेको त्यो सानो बर चौताराको दायाँ बायाँ अब त ठूला भैसके छन् । बरु तिनीहरु सँगसँगै छन् तर हामी चाहिँ छुट्टिएछौँ बिना कारण नै कहिल्यै नभेटिने गरि । हामी मरेपनि हामीले रोपेका बर पिपलहरु बाँचिरहुन् युगयुगसम्म हाम्रो पिरतीको साक्षी बनेर ।
(चर्चित गायक कुमार सुब्बाको स्वरको हेर्दा हेर्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी बोलको गीतको भावानुसार)
Previous articleनेकपा बैठकः महाधिवेशनको मिति तय, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन
Next articleकोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पुनः दोहोरो अंकमा, १४ संक्रमितको मृत्यु
एमाले विधान महाधिवेशन : तयारी पूरा, ६ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने
Hey Buddy!, I found this information for you: "हेर्दा हेर्दै कस्तो भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी !". Here is the website link: https://epurbeli.com/archives/2582. Thank you
हद नाग्दै भारतीय मिडिया
दृष्टिकोण २०७७, २७ भाद्र शनिबार १२:०७